Manjaro 18.1.5, yazvino vhezheni ye2019 inosvika ine shanduko zhinji | Linux Vakapindwa muropa
Manjaro 18.1.5, yazvino vhezheni ye2019 inosvika nekumwe shanduko kupfuura zvakajairwa
Zvinoita sekudaro Manjaro GmbH & Co KG Aida kutikorokotedza paKisimusi uye neimwe nzira iri nani yekuzviita pane neshanduro nyowani yesystem yake yekushandisa. Tinogona kuve nemhinduro mumufananidzo wavakashandisa kupa Manjaro 18.1.5, imwe mune iyo yeKisimusi mavara anotungamira (tsvuku uye girini) uye matinogona kuverenga «Happy 2020». Pamusoro pezvo, pakati pezvipo zvavanotiunzira isu tine shanduko zhinji kupfuura zvakajairwa, kana zvirinani ndiko kunzwa kwekuve nerumwe rwakawandisa runyorwa rwezvinhu zvitsva kupfuura zvaburitswa zvakapfuura.
Pakati pekuchinja, kwatinogona kuwana kubva manjaro.org/news uye nekudzvanya pamufananidzo weManjaro 18.1.5, haitaure zvakananga kernel inoshandiswa neshanduro iyi, asi inongoti Linux 5.3 yasvika pahupenyu hwayo. Zviri pachena kuti ndeipi vhezheni yekernel inoshandiswa mumufananidzo, patinoona zvakajeka kuti ndizvo Linux 5.4. Pazasi iwe une runyorwa rwezvinhu zvitsva zvakaverengerwa muManjaro 18.1.5.
Pfungwa dzeManjaro 18.1.5
Nvidia 340.108 kugadzirisa kwapera.
Bhurawuza rakashinga rakagadziriswa kune yazvino vhezheni.
Iyo KDE-git mapakeji akagadziridzwa. Ivo vakatarisa zvakanyanya pavari.
AMDVLK ikozvino iri 2019. Q4.5.
Qt5-Stack yakagadziridzwa kune iyo 5.14 yakateedzana.
Iyo network maneja yakagadziridzwa kuita vhezheni 1.22.2.
Old module akabviswa muXorg-Stack.
php yakagadziridzwa kuita vhezheni 7.4.1.
KDE Maumbirwo 5.65.0 ari kuuya kune iyo KDE kuburitswa.
Mesa inosvika neyekutanga poindi yekuvandudza yeiyo 19.3 akateedzana.
KDE Kunyorera 19.12.0 mune iyo KDE vhezheni.
Sezvo vazhinji venyu vatinoziva, Manjaro inoshandisa iyo yekuvandudza modhi inozivikanwa se Kutenderera Kuburitswa, zvinoreva kuti iyo mifanikiso mitsva ndeye yekuisa nyowani chete; Vashandisi varipo vachaona shanduko idzi dzese seyakagadziriswa kubva kune imwecheteyo sisitimu yekushandisa. Vaya vanofarira kuisa Manjaro 18.1.5 vanogona kuzviita nekurodha pasi maSOO matsva anowanikwa pa Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Manjaro 18.1.5, yazvino vhezheni ye2019 inosvika nekumwe shanduko kupfuura zvakajairwa
Kudzora kwevanhu uye tekinoroji. Aya ndiwo mashandiro ayo muNorth Korea